WiFi Hacking ?????
wifi ဟက်နည်းပါ တစ်ခုတော့ သိထားပါ မဟက်ခင် စစ်ရင်ပေါ်တယ်ဆိုတာ ကိုတော့ ခေါင်းထဲ အရင်ထည့်ထားပါ စစ်ကြည့်ရင်သိပါတယ် ဖောက်တာကတော့ဖောက်လို့ ရတယ် ဖောက်တဲ့ Tools တွေလဲ တင်ထားပေးတာရှိပါတယ် အရင်ကဖောက်နည်းတစ်ခု ကိုလဲ တင်ထားပေးခဲ့ ပြီးဖြစ်သလို ဖောက်နေတဲ့သူတွေကို ပြန်စစ်မယ့်ဆော့ဝဲလ်ကို လဲ တင်ထားပေးဖူးပါတယ် ကဲ အခု ဘယ်သူရယ်လို့ နာမည်မတပ်တော့ပါဘူး မေးထားတာ အများဆုံးမေးခွန်းမို့လို့ပါ တစ်ခါတလေလဲ တွေးမိပါတယ် အချောင်လိုက်ချင်သူတွေ ဒီလောက်တောင်ပေါသလားလို့ ပြောရင်တော့ဖြင့် ပညာရပ်ကိုတတ်ချင်လို့ပါ လို့တော့ပြောတာပဲ တကယ်တန်း ဒီလို မဟုတ်တာကိုတော့ ကိုယ်တိုင်သိကြပါလိမ့်မယ်
tools နှစ်ခုကို အသုံးပြုပြီး လုပ်ကြည့်ကြပေါ့နော် :
ဒီမှာ Tools တွေ ဒေါင်းပါ
Step 1 : CommView ကို Install လုပ်ပါ VoIP mode နဲ့ Standard mode 2မျိုးမှာ VoIP ကို အသုံးပြအုပြီးလုပ်ပါမယ်. လိုအပ်တဲ့ drivers တွေကို အလိုလို အင်စတောလုပ်ပါလိမ့်မယ်ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပါ.
Step2:အောက်မှာ ပြထားသလို PLAY ပုံလေးကို ကလစ်ပေးပါ
Step3: ( Networkရွေးချယ်ချင်း (a) ) : START SCANNING button လေးကို ကလစ်ပေးပါ
Step4: (Networkရွေးချယ်ချင်း (b) ) : Click on the ညာဘက် Coulumn မှုာ hack ချင်တဲ့ WiFi network ကို ကလစ်ပေးပါ နောက် CAPTURE ဆိုတာကို ကလစ်ပေးပါ
Note :- ဒီ tutorial လေးက WEP protected networks တွေ အတွက်ပါနော်မေ့နေလို့
Step5: (Capturing the Packets) :started Capturing Packets
Step6: (Saving the Packets ) : အခု Packets များကို ဆေ့လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်
Click on Settings->Options->Memory Usage Change Maximum Packets 20000 ပဲရိုက်ပါ
LOGGING Tab ကိုကလစ်ပါ
AUTO-SAVING ကို Check လုပ်ပါ
Maximum Directory မှာ Size ကို : 5000 ထည့်ပေးပါ
Average Log File Size မှာ : 50 ထည့်ပေးပါ
specified directory မှာ .ncp format အနေဖြင့် 20MB နဲ့ packets တွေကို အလိုလိုသိမ်းထားပါလိမ့်မယ်
Step7: ( Concatenating the Logs ) :
.ncf file .ဖိုင်တစ်ခု၇လာပါပြီ
Step 8 : (Converting .ncf to .cap ) : ရလာတဲ့ packets တွေကို ဖိုင်ဖော့မက်ပြောင်းပစ်ဖို့ .cap file အဖြစ်ပြောင်းဖို့ အတွက် AIRCRACK နဲ့ crackလုပ်ရပါမယ်
Click on File->Log Viewer->Load Commview Logs-> Choose the .ncf file. Now File->Export->Wireshark/TCP dump format ဒီအတိုင်းလေးပါ
ဒုတိယ အပိုင်းကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်. Aircrack Folder->Bin->Aircrack-ng GUI.exe Choose the .cap file and you should be able to do the others
ကိုယ့်အရည်အချင်းအပေါ်မူတည်ပြီးလုပ်ရမရ ဆိုတာ ကွာသွားပါလိမ့်မယ်